Vovony Trenbolone vovoka (10161-33-8) Mpanao & mpamatsy - Factory
Ny voly Trenbolone, izay fantatra amin'ny anarana hoe Tren, dia mametraka ny iray amin'ireo steroids matanjaka indrindra. Tsy hahita fitambarana izay miasa toy ny Tren ianao, manana fahafahana hanova tanteraka ny vatanao.
Row Trenbolone vovoka (10161-33-8) video
Row Trenbolone vovoka (10161-33-8) Description
Ny vovon-tsolotsaina Raw Trenbolone dia androgen sy anabolic steroid (AAS) an'ny tarika nandrolone izay tsy nividy na oviana na oviana. Rola Trenbolone mpanodina vovon-tsolotsaina, anisan'izany ny acetate Raw Trenbolone (marika Finajet, Finaplix, hafa) ary rul Trenbolone hexahydrobenzylcarbonate (marika Parabolan, Hexabolan), na efa nokaramain'ny fampiasana veterinera sy klinika. Ny acetate rao Trenbolone dia ampiasaina amin'ny fanafody fitsaboana ao amin'ny biby fiompy mba hampitombo ny fitomboan'ny voanjo sy ny fihinana, raha ampiasaina amin'ny klinika ny olona hexahydrobenzylcarbonate pohezana Raw Trenbolone teo aloha, saingy tsy amidy intsony. Ankoatr'izay, na dia tsy ankatoavina amin'ny fampiasana klinika na veterinary aza, ny vidin-tsolika Raw Trenbolone dia amidy indraindray eo amin'ny tsena mainty eo ambanin'ny marika Trenabol.
Rohan-tsigolone (10161-33-8) Specifications
Product Name Row Trenbolone vovoka
Anarana simika Row Trenbolone vovoka; 10161-33-8; 17beta-Raw Trenbolone vovoka; Trienbolone; (+) - Vovon-tsigara Trenbolone; 17-beta-Raw Trenbolone volo More ...
Brand Name Finajet, Finaplix, hafa
molekiolan'ny Formula C18H22O2
molekiolan'ny Wvalo 270.37
mitsonika Point 170ºC
Application Row Trenbolone vovoka no iray amin'ireo steroids mahery indrindra amin'ny anabolisy manana fahaiza-manao fampivoarana tsara indrindra indrindra ho an'ny atleta sy ny mpamboly body. Ny tsiranoka Rola Trenbolone dia mahomby kokoa noho ny testosterone raha ampiasaina araka ny tokony ho izy sy araka ny toro-hevitra.
Inona ny Rohan Trenbolone vovoka (10161-33-8)?
Trenbolone ny poezia dia androgen sy anabolic fanafody steroid izay ampiasaina amin'ny fitsaboana tranainy, indrindra fa hampitombo ny tombotsoan'ny biby fiompy amin'ny fampiroboroboana ny fitomboan'ny taovam-pananahana. Ary omena azy koa ny fitsaboana ho an'ny taovan'ny vatan'ny olona.
Ahoana ny Rohov Trenbolone vovoka (10161-33-8) asa
Izy io dia miasa amin'ny fanakanana ny Andriamatoa Receptor tsy manova izany amin'ny estrogen, izay toy ny vokatra mivantana amin'ny fitomboan'ny masin'ny ratra.
Izy io koa dia mifototra amin'ny sela matavy amin'ny fanery azy ireo hanaraka ilay lalana very.
Indray mandeha ao amin'ny rafitra, manamafy ny fananganana azota amin'ny hozatra, izay manome ny soatoavina ambony amin'ny proteinina.
Row Trenbolone vovoka (10161-33-8) Dosage
Fanombohana, Intermediate, ary Advanced Advanced Trenbolone Dosages
Ny antony sy ny logic ao ambadiky ny dingana Trenbolone dia efa naseho sy naseho etsy ambony. Tena zava-dehibe ny mampahatsiahy ny mpamaky fa ny mpampiasa ny Trenbolone dia tsy tokony ho mpampiasa anabolic steroide anabolic - ny tsy fitoviana eo amin'ny roa dia tsy maintsy hazava. Ny mpilatsaka an-tsitrapo na ny mpisera Trenbolone voalohany dia tokony hitazona hatrany ny traikefa sy ny cycles eo ambanin'ny fehikibo mialoha ny fampiasana Trenbolone. Trenbolone izy dia tsy fitaovana iray ho an'ireo mpampiasa anabolic steroid mpampiasa. Ny olona tsirairay miezaka ny mampiasa Trenbolone voalohany dia tokony hanana traikefa ampy hahatakarana ny vatany sy ny fomba ijeren'izy ireo amin'ny fomba samihafa anteriora sy intermediate steroids anabolic (toy ny Testosterone, Dianabol, Winstrol, sns.) Ary ireo fepetra fototra sy dynamique tafiditra ao anatin'ny cyber anabolic steroid. Ny mpilatsaka voalohany sy ny mpampiasa voalohany amin'ny tranbolona dia hahita dingana Trenbolone mety amin'ny 300mg isan-kerinandro (tadidio fa ny 1,500mg amin'ny Testosterone dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny tanjaka). Ny mpisera Trenbolone sasany dia nitatitra ny fiovana ara-batana mahafa-po, na dia 200mg isan-kerinandro amin'ny tranbolon aza, na dia mihoatra aza ny doses amin'io sehatra io amin'ny fotoana mety amin'ny fatran'ny fatotra izay itiavana ny fatran'ny masin'ny tazomoka mandritra ny vanim-potoanan'ny hypocalorique. Ny fisondrotana eo ambonin'io segondra 300mg isan-kerinandro io dia saika tsy ilaina mihitsy, satria tsy mila mpitsabo ambony indrindra na mpizara Trenbolone voalohany ny mpampiasa Trenbolone dia mila doses avo toy ny 400 na 500mg isan-kerinandro.
Ireo dosilin'ny Trenbolone dia mametraka amin'ny 400 - 500mg isan-kerinandro, ary ny ankamaroan'ny mpiserasera amin'ny ankapobeny dia mifikitra amin'ny marika 400mg isan-kerinandro. Tsy misy tokony atao ny mpisera Trenbolone eo anelanelan'ny 500mg isan-kerinandro. Ny fanazavana dia tsy maintsy atao eto fa ny fahasamihafana misy eo amin'ireo sehatra telo (mpampiasa, mpandray anjara, ary avo lenta) dia tsy mampitombo ny dosage na ny dipoitra ambony avy amin'ny dingana tsirairay. Ny dosie ambony na avo dia avo amin'ny steroid anabolic dia tsy ny famaritana ny mpampiasa iray avaozina. Ny mpampiasa Advanced Trenbolone dia tokony ho raisina ho tompon'antoka amin'ny fampiasana Trenbolone, ary mahazo ny fahatakarana tanteraka sy ny fahatakarana fa tsy ny Trenbolone ihany fa ny fomba fiasan'ny orony amin'ny dinamika samihafa amin'ny Trenbolone. Ireo mpampiasa misesisesy dia fantatra amin'ny fampiasana doses High Trenbolone, saingy tsy dia fahita firy loatra izany fa tsy ny fitsipika. Amin'ny tranga tahaka izany, ireo mpampiasa misesisesy dia nihalehibe tahaka ny 800 - 1000mg na mihoatra isaky ny herinandro ao Trenbolone (tsarovy fa ny 800 - 1000mg an'ny Trenbolone dia mitovy amin'ny 4,000 - 5000mg amin'ny Testosterone). Amin'ity fananganana ity dia zava-dehibe ny mahatsiaro: avo lenta loatra ny Trenbolone dia heverina ho mampidi-doza sy mitombo hatrany ny fahasalamana amin'ny vatan'ny olombelona ary tsy tokony hozahana amin'ny toe-javatra rehetra. Raha te hanao izany ny olona iray, dia tsy maintsy atao amin'ny fikarakarana sy fitandremana ambony indrindra (ary tsy avy amin'ny mpilatsaka an-tsokosoko na ny mpampiasa azy).
Row Trenbolone vovoka (10161-33-8) Benefits
Trenbolone dia afaka manampy anao hahazo tombony haingana kokoa noho ny anabolika hafa.
Trenbolone dia manampy amin'ny fahaverezana fatotra satria afaka mampiasa ny matavy toy ny loharanon-kery ho an'ny vatana.
Misy fitomboana voafetra ny haavon'ny kortisol.
Izy io dia manampy mandritra ny dingana famaranana.
Manatsara ny fihazonana azota izany.
Trenbolone koa dia tsara ho an'ny fambolena.
Buy Buy Trenbolone powder from Buyaas.com